बार्षिक १३ करोड आम्दानी लक्ष्यसहित सरकारले वेश्यालयलाई कानुनि मान्यता दियो ! - E ALL NEPAL
बार्षिक १३ करोड आम्दानी लक्ष्यसहित सरकारले वेश्यालयलाई कानुनि मान्यता दियो !
काठमाडौं । देश संघीयतामा गएपछि जनताले आर्थिक भारको महशुस गर्न थालेका छन । हरेकक क्षेत्रमा अहिले कर र भ्याट लगाइएको छ । निम्न स्तरका नेपाली जसलाई परिवार पाल्न मुस्किल भइरहेको छ उसले आफ्नो आम्दानीको ठुलो हिस्सा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएका कारण आर्थिक हैंसियत कमजोर हुनेहरुलाई ठुलो चोट पुग्ने जानकारहरु बताउँछन ।
जनताको यस कुरालाई सरकारले नेपाल संघीय प्रणलिमा हालैंमात्रैं गएको हुनाले यसको प्रयोग केही कठिन भएको जिकिर गर्दै आएको छ । सरकारकानुसार भविष्यमा अहिले जनताले दिएको करको प्रतिफल प्राप्त हुने जनाउँदैं आएको छ । सरकारको यस कुरालाई जनताले कसरी लिन्छन त्यो आफैंमा एक फरक विषय हो । नेपाल एक कृषिप्रधान देश भएको हुनाले व्यवसायिक रुपमा कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरुलाई सरकारले आर्थिक बोझ भन्दा पनि सहुलियत दिनुपर्ने आजको आवश्यक्ता रहेको ब्याख्या पनि भइरहेको छ ।
सरकारले बजेट ल्याउने समयमा जनतालाई कम आर्थिक बोझमा कसरी धेरैं लाभ उठाउने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ । देशमा रहेको मुद्रालाई बलियो बनाउँदैं उक्त देशका जनतालाई सस्तोमा वस्तु तथा सेवाहरु उपलब्ध गराउँने बारेमा हरेक सरकारले सोच्नुपर्छ । यो त हामीले नेपालको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं तर आज हामी तपाईलाई अलिक फरक करका बारेमा जानकारी दिन जाँदैंछौं । तपाईले नेपालमा अनेक बहानामा कर तिर्नुभएको छ तर कहिल्लैं यौंनसम्पर्क गरेकोमा सरकारलाई शुल्क तिर्नुभएको छ ।
तपाईलाई यो कुरा सुन्दा केही अच्चम लागेको हुनसक्छ तर एक समय थियो जब यस्तो अनौंठो कुराहरुमा विशिष्ट कर संसारमा लगाईयो, जुन आज पनि केही देशमा लागू हुन्छ । यद्यपि यस्तो केही करको बारेमा सुन्दा हामीलाई अच्चम लाग्दछ। आज, यिनीहरुमध्येको एक कर हो सेक्स कर (सम्भोग कर) कुरा गर्दैछौं जुन आज पनि यो संसारमा प्रचलनमा रहेको छ । चिन्ता नगर्नुहोस् यस्तो कर नेपालमा लगाइएको होईन ।
सेक्स कर अर्थात यौन सम्पर्क गर्दा तिनुपर्ने राजश्व जुन अहिले जर्मनिमा प्रचलनमा रहेको छ । तपाईलाई सायद यो कुरा जानकारी नुहन सक्छ कि जर्मनीमा सेक्स कर कानूनलाई लागू गरिएसँगैं वेश्यावृत्तिलाई पनि कानूनी मान्यता दिइएको छ। यो कानून सन २००४ मा बनाइएको थियो। यस कानुननुसार हरेक वेश्याले प्रति महिना ( १५० यूरो )अर्थात १९२९४ रुपैँया) तिर्नुपर्छ। यस सेक्स करको कारण, एक वर्षमा (१० लाख यूरो) अर्थात १२ करोड ८६ लाख २७ हजार ४ सय दुईको आम्दानी भएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
यस्तो त कसैलाई नी नहोस ! १३ वर्षकी बालिका गर्भवति, यसरी फकाएर भएछ वलात्कार – बल्ल थाहा भयो ,हेर्नुहोस
अचम्मका केही यस्ता घटना: जसले भाग्यमा विश्वास गर्न तपार्इलाई बाध्य बनाउँछ (तस्बिर सहित)